Uphengululo lwePen Bamboo Stylus Duo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje, sihlala sinepensile kwisitayile sale sizakuyihlalutya kule post ukuze sikwazi ukubhala kwithebhulethi okanye kwi-smartphone efanayo enescreen esikhulu. Olo hlobo lwepensile ikuvumela ukuba ufumane olunye uhlobo lokuziva xa sibhala okanye sizama ukuzoba ngayo.
Ipensile ihlala ixabisa kakhulu kwaye inokuba sisizathu sokuthatha isigqibo sokuthenga umgangatho ophezulu onexabiso eliphezulu njengale Bamboo Sylus Duo. Ipensile yeWacom engadluli kwi-euro ezingama-29 kwaye inothotho lweempawu ezinokuyenza ukuba ibe kukuthenga okufanelekileyo ukuze ukwazi zoba ngokuchanekileyo kwaye unokuchukumisa ukuthamba, ezimbini zeempawu endiye ndadityaniswa ukuze ndikwazi ukupeyinta kwitafile yam.
1 IIMPAWU ZAKHE
2 Iimvakalelo ezinikwayo
I-Bamboo Stylus Duo ibonakaliswe zibe neziphelo ezibini, enye eyenzekayo ukuba iya kuthi siyisebenzise kwithebhulethi okanye kwi-smartphone, kwaye enye ibe yipeni yobomi bonke. Uyilo lwale pensile luyi-ergonomic kwaye alungeni kwiindawo ezininzi zokugcoba ukugxila kwinto esisiseko kunye nokufika ngexesha. Kodwa oku kulapho kubonakala khona ukusinika imvakalelo elungileyo xa siqala ukubhala okanye ukuzoba nayo kwiscreen sesixhobo sethu esiphathwayo.
Ngelixa iipensile eziqhelekileyo zale ndlela sifumana incam yerabha elula nesisiseko, kwi-Bamboo Stylus Duo esiyifumanayo uhlobo lomnatha olugubungela incam ukunikezela ngononophelo oluchukumisayo noluchanekileyo esinokuthi senze ngalo uninzi lwayo imifanekiso yedijithali esiza kuyenza.
El ubunzima bepeni bulungile kwaye ithathwa simahla xa siqala ukupeyinta ngayo. Ukufumana okuninzi kuyo, unayo iphepha le-Bamboo simahla nakweyiphi na iivenkile ezibonakalayo ze-Android kunye ne-iOS, kodwa ungasoloko ungena kwelona liphambili, njenge-Autodesk SketchBook.
Olunye uvakalelo olunikezelwa yile Bamboo Stylus Duo, xa ubani etsala emva kwethutyana, yile ungazilibala ukuba usebenzisa ipensile Olu hlobo kwaye uphantse waziva unepeyinti ngokungathi uyenza ephepheni okanye kwinqanawa. I-Freehand kunye ne-pulse eyaneleyo, ivumela ukuba ilawulwe kwaye ayibeki mqobo ungaphezulu. Unomzekelo ungezantsi womzobo wamehlo owenziwe ndim ukubona ukuba ngesandla esilungileyo ungenza njani imigca ecocekileyo nengafaniyo.
Ukuzoba iliso kwi-Autodesk Sketchbook ngeStylus Duo
Ngokufanelekileyo ukuba sinethebhulethi enobungakanani obungaphezulu kweesentimitha ezi-7, siya kuba nendawo yescreen kwaye ngoncedo lokusondeza, njengakwinkqubo ye-Autodesk, sinako chaza kwiinkcukacha ezininzi ukufumana iziphumo ezilungileyo kakhulu.
Olunye ubuhle bayo kukuba xa umntu esiqhela ukusisebenzisa, uyaqhubeka nokuyisebenzisa kunye nayo yonke ithebhulethi Ngaphandle kokuyiqonda, njengoko inika amava amahle ekuchukumiseni.
Ngamafutshane, ukuthenga okunyanzelekileyo kwabo basebenzisa i-tablet okanye i-smartphone ukupeyinta ukuba nesona sixhobo sichanekileyo esandleni sakho. Iyafumaneka nge-29,90 i-euro kwivenkile yeWacom uqobo, onokufikelela kuyo ukuze ungene kwilifu elinikezelwa leli qonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Sihlalutye usiba lwe-Bamboo Stylus Duo
Uthotho olukhuthazayo lwemifanekiso yezilwanyana eyenziwe ngepeni emnyama